Landa Iphakheji Lensiza Yamathuluzi we-LINE | Kusuka kuLinux
Landa iphakethe lensiza ye-LINE Tools
Njengoba wonke umuntu azi, I-LINE uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo ngokushesha kepha onjiniyela bakhe iphakethe lamathuluzi avumela ukunweba imisebenzi yeklayenti lokuthumela imiyalezo ngokungeza izinketho ezingeziwe ekuthumeleni imiyalezo nezitika ezibiziwe LINE Amathuluzi.
LINE Amathuluzi i-suite yamathuluzi engeza imisebenzi eyengeziwe ku-LINE, ikakhulukazi imisebenzi eyishumi nane eyengeziwe ongayengeza ku Idivayisi ye-iOS noma ye-Android.
Iningi lale misebenzi yilezo ezivame ukufakwa ezinhlelweni ze- "Swiss Army Knife" eziletha ndawonye amathuluzi amaningi kokukodwa nezinsiza zokusetshenziswa kwansuku zonke, njenge-unit converter, i-flashlight, ikhampasi, isibuko noma i-calculator phakathi kwabanye.
Yonke le misebenzi ifakiwe kudivayisi ngephakeji elilodwa lamahhala, uma nje uhlelo lokusebenza selufakiwe lapho ulusebenzisa kufanele sikhethe ithuluzi esizolisebenzisa ohlwini kuphela, silondoloze isikhala nezinsizakusebenza kunokuba bekufanele silande ngamunye ngokwehlukana.
I-Como todos los amathuluzi amaphakheji, Ungathola izinsiza ezithile ezingafani ncamashi, njengekhalenda laseJapan, elizolisebenzisa eJapan kodwa kepha kufaka phakathi ikhalenda lasentshonalanga bekungaba usizo kakhulu kubasebenzisi abangaveli e-Asia.
Landa amathuluzi we-LINE we-iOS Lapha
Landa amathuluzi we-LINE we-Android Lapha
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Landa iphakethe lensiza ye-LINE Tools
Ukufaka i-GNU / Linux kwenye i-HDD ngaphandle kwediski yokufaka
Landa i-LINE Antivirus